Ungawudibanisa njani umxholo wakho we-B2B ukuze uvelise iiNkokeli ngeNetLine Portal | Martech Zone
NgoMvulo, Agasti 21, 2017 NgoLwesibini, Agasti 22, 2017 Douglas Karr
IyandEyesPortal liqonga lokuvelisa elikhokelayo le-B2B yasimahla apho iiarhente zinokwenza iphulo lokudibanisa umxholo ukuqhuba ulwazi okanye ukubamba izikhokelo.
Inkqubo ibonelela ngeminikelo emibini eyahlukeneyo:
LeadFlow ukuvelisa izikhokelo, ukuvumela ukuba udibanise umxholo wakho, sebenzisa iifilitha zokukhokela kunye nokufumana amanqaku, sebenzisa Intengiso esekwe kwiakhawunti, yongeza imibuzo yesiko, setha uhlahlo-lwabiwo mali kunye neshedyuli, iingxelo zomkhankaso wokufikelela, kunye nokufumana izikhokelo ezisemgangathweni. Izikhokelo ziqala kwi- $ 9 ngokukhokela.
UmxholoFlow ukuqhuba ulwazi lwebranti ngokudibanisa umxholo wakho kunye nokufikelela kwiingxelo zomkhankaso. Oku kusimahla kubo bonke abasebenzisi.
INetLine isebenza kwinethiwekhi enkulu yokunxibelelana komxholo we-B2B, Ukuphendula, ebenza bakwazi ukudibanisa umxholo wakho nabaphulaphuli abafanelekileyo. Inethiwekhi ithimba idatha yomntu wokuqala engeniswe ngokuthe ngqo ngamalungu agcwalisa ifom yokucela umxholo wakho.
Amaqabane abo okupapasha, njengathi, bayazibandakanya apho bafumana khona umxholo omtsha okhethekileyo kwimidla yabaphulaphuli babo, ukujonga ukusebenza, kunye nokuhlalutya inani labaphulaphuli kunye neeNgxelo zabo zobuNgcali beAudience (AIR). Kwaye ayisiyiyo nayiphi na indawo abayamkelayo, iRevResponse ine-99% yokwala inqanaba lezicelo zabapapashi ezintsha zokujoyina.
Inkqubo yokuvunywa ibandakanya ukuvavanywa okuqinisekileyo ukuqinisekisa ukuba bonke abapapashi bayazifezekisa izikhokelo zoluntu ezingqongqo, ukubonelela abathengisi nge:
Umxholo wokwenene -Umxholo wakho ukwinkampani elungileyo-epapashwe kwelona thala leencwadi likhulu lobungcali lomxholo kwiwebhu, iTransPub.com, eneNetLine. Amalungu abo angacela umxholo wakho kwaye afikelele kuwo nangaliphi na ixesha nakwesiphi na isixhobo esikwithala labo leencwadi.
Unxibelelwano lokwenyani -Ukuba usebenza inethiwekhi enkulu ye-B2B yokunxibelelana komxholo kwaye ubambe iiprofayili zokwenyani ngokuthe ngqo kwiingcali, awudingi ukuya kwenye indawo-zonke izikhokelo ziveliswa liqonga labo, kunye nabapapashi babo. Babuze ukuba uvela phi ukhokelo lwakho kwaye baya kukuxelela-Idilesi ye-IP, isitampu sexesha, kunye nokuninzi- 100% elubala.
Uthethathethwano lokwenene -Umnatha wabo wokudibanisa umxholo we-B2B kunye noncedo lwethala leencwadi lixhasa ukusebenzisana kwabasebenzisi apho i-125 yezigidi + iingcali ziphanda kwaye zisebenzisa umxholo rhoqo ngenyanga-leyo yeyona njongo yokwenyani. Izenzo zingaphezulu kwe ukujonga iphepha, iintshukumo zabo zibandakanya izicelo zomxholo, ukuqinisekiswa kwe-imeyile, kunye nokukhutshelwa komxholo ngokuzalisekiswa kwexesha lokwenyani. I-80% yomxholo opapashiweyo oceliwe ukhutshelwa ngaphakathi kweentsuku ezintathu.
Umgangatho wokwenene Inkqubo yabo yokuhlanjululwa kwedatha ibekwe emgangathweni kuwo onke amaphulo akhusela umgangatho wezikhokelo ezifakiweyo. Isisombululo esisekwe kwintsebenzo kunye neqela labo leengcali zokuvelisa phambili baqinisekisa ukuba uya kuhlawulela kuphela izikhokelo ezihlangabezana neenjongo zakho zomkhankaso - akukho nto ingaphantsi.
Abantu bokwenyani -Ubulungu babo buquka amawaka eengcali ezingenise iprofayili yamanqaku ayi-15 + ukufikelela kwilayibrari yezixhobo, ibenza babe ngabaphulaphuli abazinikeleyo- Akukho ludwe luthengiweyo okanye luqeshiweyo, ixesha. Izigidi ezingama-40 + zomxholo zigqityiwe ngamalungu abo kuhambo lwabo lophando lobuchule kunye neNetLine.
Ukhuseleko lokwenyani Inkqubo yokuvelisa ekhokelwayo ikhuselekile ukuqala ukugqiba ngamanyathelo abo okhuseleko ngokubanzi kubandakanya iskena sokhuseleko lokukhuseleka kweQualys kunye nokubethela kwe-SSL.
Imilinganiselo eyiyo -I-NetLine isebenza ngokulandela amaxabiso asisiseko amahlanu: ukuvelisa izinto ezintsha, ukusebenzisana, ukuthembeka, ukoneliseka kwabathengi kunye noxanduva lokuphendula. Itekhnoloji yabo ehambele phambili kunye nenqanaba elikhulu libekwe ngokukodwa ukufezekisa iziphumo abathengisi abazifunayo - abayibeki esichengeni impumelelo yabo ngokwaphula imithetho. INetLine ihlonipha i-CAN-SPAM, i-CASL, kunye ne-Do not Call Registry.
Bhalisela i-Netline Portal yakho yasimahla Bhalisela iDemo yeNetline
Ukubhengezwa: Sisebenzisa amakhonkco ethu abambiseneyo kule post neNetlinePortal kunye neRevResponse.
tags: ulungelelwaniso lomxholoumxholoukukhokelaI-portline yenethiwekhiiphepha elimhlopheWhitepaper